Xildhibaan Jeesow: Waan uga digay hay’adaha amniga weerarka goobaha gaadiidka lagu baaro – Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa dhaliilay mas’uuliyiinta amniga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in ay kawar haayeen in Al-shabaab ay qarxin doonaan baraha Kontaroolka ee lagu baaro gaadiidka warbixintaasna ay la wadaageen mas’uuliyiinta amniga balse laga faa’ideysan waayay talo soo jeedintooda.
Wareysi uu siiyay Kalfadhi ayuu ku sheegay in Ciidamada ay fariisin ka dhigteyn meyl dhowr tilaabo u jirta halka gaadiidka lagu joojiyo kadibna lala soo lugeeyo aqoonsiyada taasna ay sababto ay in gaadiid badan isku soo gaaraan Al-shabaab-na ay mashquulkaas ka faa’ideestaan.
“Dhamaan dadkii ku geeriyooday Alle ha u naxariisto, kuwa dhaawacana Alle ha u booga dhayo” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. “Waan qabnay walaaca ah, in kooxahaan halista ku ah dadka Soomaaliyeed ay beegsan doonaan gaadiidka meel la isugu geeyo ee feelka dheer la geliyo sababtoo ah meel dad joogaan ayey raadsadaan Al-shabaab” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Xildhibaan Jeesow ayaa sheegay in hey’adaha amaanka ay ku wargeliyeen Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya mas’uuliyiinta amaanka laakiin aan laga jawaabin tala soo jeedintooda ku saabsaneed xaaladda amni ee dalka.
“In madax gaadiid ay saaran yihiin la isugu keeno kontarool waa fursada Al-shabaab sababtoo ah kama soo gudbi karaan fursadaasi laakiin dadkii ay rabeen ayaa meel la isugu keenay” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow.
Xirnaanshiyaha magaalada Muqdisho iyo qaraxyada oo wali ka dhacaya Gobalka Banaadir ayuu sheegay in ay tahay qorshe xumi iyo dadaal xumida Xukuumadda Soomaaliya. Xildhibaan Jeesow waxa uu ku taliyay in Xukuumadda Soomaaliya ay wax ka badasho qorshaheeda amaanka dhowr bilood mar oo aan lagu taagnaanin hal istiraatiijiyad.
“In magaalada Muqdisho ay kala xiran tahay walina qaraxyadii ay dhacayaan waxaa sabab u ah in aan la badalin qorshaha amniga, ma jirto wax qorshe ah oo u dagsan Xukuumadda” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow oo katirsan gudiga amniga ee Golaha Shacabka.
Xildhibaankii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho oo isbitaalka laga saaray